Nchịkọta Google: Nchịkọta ọdịnaya maka Ọdịnaya arụmọrụ arụmọrụ | Martech Zone
Njirimara a na Google Analytics nwere ike ịbụ otu nnukwu na aka kachasị na wepụtara ha ogologo oge! Ka anyị na-ewepụta ọdịnaya maka ndị ahịa, anyị na-agbakọ ọnụ ọgụgụ mgbe niile na ọkwa dị elu iji ghọta ihe contnet na-arụ nke ọma na nleta na ntụgharị. Anyị na-e mimomi n'ezie a akuko omume nke ndị ahịa site na-eke otutu akaụntụ na-agbakwunye segmented pageviews dabere na ọdịnaya… ma Nchịkọta ọdịnaya n'ime Google Analytics na-akpaghị aka usoro ahụ ma na-etinye ya n'ime akụkụ ọ bụla nke akụkọ gị - site na nleta ndị ọbịa na nsụgharị nsụgharị.
Nchịkọta ọdịnaya na-enye gị ohere ịchịkọta ọdịnaya n'ime usoro ezi uche dị na ya nke na-egosipụta otu ị si eche maka saịtị ma ọ bụ ngwa gị, wee lelee ma tulee usoro a chịkọtara site na aha otu na mgbakwunye na ịnwe ike ịdaba na URL ọ bụla, aha peeji, ma ọ bụ aha ihuenyo. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhụ ọnụọgụ nchịkọta nke ibe maka ibe niile na otu otu dị ka Men / Shirts, wee kpoo iji hụ URL ọ bụla ma ọ bụ aha peeji.
Mgbe ị gbanwetụrụ gị nsuso koodu, ị na-eji ndeksi nọmba (1-5) mata Ọdịnaya Grouping, na ị na-eji otu aha iji mata gị Otu Ọdịnaya:
nchịkọta.js: ga ('set', 'contentGroup','');
Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ị na - ahazi Njikọ Ọdịnaya maka Uwe mara nke Index Nọmba 1, na n’ime ịmepụta ihe ahụ. Otu Ọdịnaya akpọ Men, ị ga - enwe ihe ndị a:
analytics.js: ga ('set', 'contentGroup1', 'Nwoke');
ga.js: _gaq.push (['_ setPageGroup', '1', 'Ndị ikom']);
E wezụga na koodu nyocha, ị nwekwara ike ịmepụta Ọdịnaya Ọdịnaya tinye n'ọrụ mmịpụta regex, ma ọ bụ iwu.
Ọbụna ị nwere ike ịmepụta echiche site na iji nchịkọta ọdịnaya, na-enye echiche dị ịtụnanya maka arụmọrụ ahịa ọdịnaya gị.
Ọzọ mma mma nke Nchịkọta ọdịnaya bu na akuko edebere dabere na nleta pụrụ iche, ọ bụghị echiche zuru ezu. Nke a na-enye azụmahịa gị nkọwa doro anya nke ole ndị ọbịa na-eri ọdịnaya, site na isiokwu, karịa site na peeji nke - nke nwere ike ịghasa mkpesa ma ọ bụrụ na otu onye ọbịa bịara na-eleta ọtụtụ isiokwu na saịtị gị na otu isiokwu ahụ.
Tags: ọdịnaya ọdịnayanchịkọta ọdịnayaGoogle Analytics
Iweghachite Ahịa Mobile